I-Osteoarthritis yezandla | Isizathu, Iimpawu, ukuthintela, ukwenza umthambo, unyango
I-Osteoarthritis yeZandla (i-Hand Osteoarthritis) | Isizathu, iimpawu, ukuthintela kunye nokunyanga
Osteoarthritis yezandla kuthetha ukunxiba ngokudibeneyo ezandleni, kwiminwe nakwizihlahla. I-Osteoarthritis yezandla inokubangela iintlungu, iintlungu kunye nokunciphisa ukubamba - okuthi, phakathi kwezinye izinto, kunokwenza kube nzima ukuvula iingqayi zejam okanye ukubamba ikomityi yekofu. Ukuchonga isifo kunokuthi, kwiimeko ezininzi, kugcinwe kukuhlolwa kunyango lomzimba, ukusolula imihla ngemihla kunye nokwenza umthambo. Siyakukhumbuza ukuba uya kufumana ividiyo yokuziqhelanisa nokuzilolongela izandla zakho ezantsi kwinqaku.
AMACEBISO: Abantu abaninzi abane-osteoarthritis ezandleni zabo bayisebenzisa iiglavu zoxinzelelo ezitshintshiweyo (ngolu hlobo - ikhonkco liyavula kwiwindow entsha).
Isifo samathambo esandla sibandakanya ukophuka kwenqwelomoya kunye namathambo eminwe kwiminwe, emigudwini nakumajoyina amancinci esandla. Ichaphazela ikakhulu:
Umdibaniso wokuqala we-Metacarpal (isiseko sesithupha)
Iminwe (idibeneyo ye-PIP, idibeneyo yangaphandle yeminwe)
Ukudityaniswa kweminwe ephakathi (ukudityaniswa kwe-DIP, ukudibana okuphakathi kweminwe)
Funda: Izigaba ezi-5 zeKneartrose
I-Osteoarthritis yahlulwe yangamanqanaba amahlanu. Funda ngakumbi malunga nayo kwinqaku elingezantsi.
Landela kwaye usithande Iphepha lethu le-Facebook og Ijelo lethu le-YouTube simahla, uhlaziyo lwempilo mihla le.
Kwinqaku, siza kujonga:
Iimpawu ze-osteoarthritis ezandleni
Unobangela wesifo samathambo ezandleni
Amanyathelo okuzikhusela ngokuchasene nesifo samathambo esandla
Ukuthintela isifo samathambo eminwe nasezandleni
Unyango lwe-osteoarthritis ezandleni
Ukuxilongwa kwesifo samathambo
Kule nqaku uza kufunda ngakumbi malunga ne-osteoarthritis yezandla kunye nonobangela, iimpawu, ukuthintela, iindlela zokuzikhusela kunye nokunyanga le meko yeklinikhi.
Iimpawu ze-Osteoarthritis kwiZandla
Iimpawu kunye nentlungu amava obuqu ahluka kakhulu kumntu nomntu. Abanye abantu bane-osteoarthritis ebonakalayo ngaphandle kwentlungu okanye uphawu olunye- ngelixa abanye, abane-osteoarthritis encinci, benamava entlungu kunye nentlungu edibeneyo. Iimpawu zihlala zahluka ngokwenqanaba le-osteoarthritis.
Ngokufanelekileyo, wahlulahlula isifo se-osteoarthritis ukusuka kwinqanaba 0 (akukho nyango okanye isifo esidibeneyo) ukuya kwinqanaba lesi-4 (ukuqhubela phambili, ukuqaqamba kwamathambo kunye nokunxiba). Amanqanaba awahlukeneyo anika umqondiso wokuba ingakanani i-cartilage etyhoboziweyo kumalungu kunye nobukhulu bokunxiba okuhlanganisiweyo. Unokufunda ngakumbi ngamanqanaba ahlukeneyo e-osteoarthritis apha.
Iimpawu zempawu kunye neempawu zekliniki kwi-osteoarthritis ingaquka:
Ubunzima bunokwenzeka kumadolo, phakathi okanye ngakwindawo ukudibana kweminwe
Ukukhanya okanye ukudumba okucacileyo kwamalungu achaphazelekayo
Ukukhululeka kwengcinezelo yendawo ngaphezulu kwamalungu
Ukunciphisa amandla okubamba
Ukunxiba kakhulu kunokubangela ukuba iminwe yakho ibe buhlungu
Isenzo ezandleni ngexesha lokusebenzisa kunye nomthwalo
Ukwanda kwimeko yokunyanzeliswa kweentlungu kwimikhono yangaphambili kunye ne-elbow
Izandla ezichaphazeleka yi-osteoarthritis nazo zinokubangela ukwanda kwezigulo zezifo zangaphambili, iingxaki zamagxa kunye ne-tendonitis esinqeni. Kungenxa yokuba umntu uhlala eqala ukubuyekeza ngokungachanekanga ukuba izandla azisebenzi ngendlela ebekufanele ukuba ziyenze-kwaye ke oko kuchaphazela ezinye izakhiwo kunye neendawo. Oku kubizwa ngokuba kukugula kwembuyekezo. I-Osteoarthritis yezandla inokuthi, ngenxa yokulayisha okungachanekanga, ikwanikeze nesiseko sokwanda kwentlungu yentamo (kubandakanya uxinzelelo lwentamo) kunye neengxaki zentamo.
Kutheni izandla zakho ziba nzima kwaye ziqaqambile kusasa?
Xa ulele okanye uhleli uzolile, ujikeleza oluncinci lokujikeleza kwegazi kunye ne-synovial fluid kunokuba ushukuma-yiyo loo nto uqina ekuqaleni kwakamsinya nasemva kokuba uhleli uzolile. Kodwa, njengoko uyazi, wawungenayo le nto ngaphambili-ke ikwabonisa ukuba izandla zakho azikho kwimeko ephezulu ngokuhamba kunye nempilo ngokubanzi. Kuqhelekile ke ukuba lukhuni kusasa, kodwa kungabonisa ukuba unengxaki ezithile ngezihlunu kunye namalungu ekufuneka ephandwe kwaye anyangwe.
Ukuzibandakanya kunye nokuthintela i-Osteoarthritis kwiZandla
Ukuba ufuna ukuthatha indlela esebenzayo yokuthintela kunye nokunciphisa inkqubo yokuguga ezandleni zakho oku kunokwenzeka ngokupheleleyo. Ukomeleza izihlunu ezandleni, iingalo kunye namagxa, unokukhulula amalungu, kunye negalelo ekuphuculeni ukujikeleza kwegazi kunye nokugcinwa. Uninzi lusebenzisa iiglavu zoxinzelelo ezitshintshiweyo (ikhonkco livula kwiwindow entsha) ukuya, phakathi kwezinye izinto, ukwandisa ukujikeleza ezandleni. Apha ngezantsi ubona iinkqubo ezimbini zokuzilolonga ezicetyiswayo- kwifomathi yevidiyo.
IVIDO: Ukuzivocavoca oku-7 ngokuchasene ne-Osteoarthritis yesandla
Apha ungabona ividiyo yemisebenzi esixhenxe esihamba ngayo kweli nqaku (funda: Ukuzivocavoca ngokuchasene ne-Osteoarthritis yesandla). Unokufunda inkcazo eneenkcukacha malunga nendlela yokwenza umthambo kumanqanaba 1 ukuya ku-7 apha ngezantsi.
Khawucinge nje xa uphakamisa into ngezandla zakho-uninzi lwamandla luvela emagxeni nakumva wangasemva. Ke ngoko, ukomelela okuhle emagxeni kubalulekile ukugcina izandla ziphilile kwaye zikwimeko entle. Ngokusebenzisa amandla omabini kwezihlunu ezikufutshane, kunye nokwenza umthambo rhoqo, unokugcina ukuhamba kakuhle kwegazi kunye nokuqina kwemisipha. Sicebisa ukuba uzame ukwenza ezi zinto, okanye ezifanayo, ukuzivocavoca izihlandlo ezininzi ngeveki.
IVIDIYO: Amandla oQeqeshiweyo aBakhonkxiwe nge-Elastic
Funda ngakumbi: - Uqheliso lwe-7 lweOsteoarthritis yesandla
Funda ngakumbi: -Yintoni ekufuneka uyazi malunga noxinzelelo lweNtamo kunye neMisipha eQine yeNtamo
Eli khonkco livula kwifestile entsha.
Osteoarthritis inokuthi ikhokelele ekubaleni kwiminwe, ezandleni nasezandleni
Xa i-cartilage phakathi kwamalungu ahlukeneyo eminwe, izandla kunye nenciniba isaphula, iinkqubo zokulungisa ziya kwenzeka ngokwabo kumzamo wokufuna ukonakala. Ezi nkqubo zikwabandakanya ukubekwa kwethambo leethambo kwiindawo ezichaphazelekayo- nezithi zikhokelele ekubalweni nasekufakeni amathambo.
Olo lubalo lubonakalayo kwii-x-reyi kwaye lubonelela ngesiseko sokuxela ukuba iphantsi kwayo isifo samathambo. Xa kukho ebonakalayo, amathambo amakhulu kwiminwe okanye kwimingxunya emva koko oku kuyacaca ukuba kukho ugqirha wamanyala ophucukileyo wenqanaba kamva.
Xa iindawo zethambo kunye nokubala okucacileyo kwenzeka kwindawo engaphandle yeminwe, ezi-zezonyango-ezibizwa ngokuba ziindawo zikaHeberden. Uninzi lwabantu luhlala lufumanisa ukuba lunamaqhezu amancinci, acacileyo kwicala elingaphandle lokudibana komnwe (DIP joints) kwaye bazibuze kakhulu ukuba inokuba yintoni. Inyani yile yokuba kukho ukubalwa.
Ukuba ukubala okufanayo kunye namanqanaba kwenzeka ngokudibeneyo ngaphakathi kwangaphandle kwendibaniselwano ke oku kubizwa ngokuba yimikhonto yeBouchard. Le nkcazo iyasetyenziswa ke ukuba ikhonkco eliphakathi (ikhonkco le-PIP) liyachaphazeleka.
Funda ngakumbi: -Uyikhupha njani imixokelelwane yezihlunu eNtanyeni nasemagxeni
Imisipha ebuhlungu? Thetha ingxaki namhlanje kwaye uqale ngokwenza imisebenzi eboniswe kwinqaku elingezantsi.
Funda ngakumbi: -IYoga inokuyikhupha njani iFibromyalgia kunye nePain engapheliyo
Isizathu: Kutheni ufumana isifo samathambo ezandleni zakho?
Ukudibanisa ngokudibeneyo kwenzeka xa imithwalo iphezulu kunokuba amandla omzimba ekhulula kunye nokulungiswa. Ngokufanelekileyo, umntu uya kuba nezihlunu ezizinzileyo ezinokuthi zikhulule amalungu ukuba angafumani kwaphela - kodwa ngelishwa akunakwenzeka.
Kungenxa yokuba utshintsho oluqhelekileyo lokunxiba ngokudibeneyo kunye nokwanda kwe-osteoarthritis kukhula-ngenxa yokunxiba okuqhelekileyo kunye nokukrazula kubomi bemihla ngemihla. Ngobudala, sinesakhono esibuthathaka sokulungisa i-cartilage kunye namajoyina. Kwizandla ikakhulu ukuphindaphindeka koxinzelelo olusemva kwesininzi sokudibana okudibeneyo kunye nonyango lwamathambo.
Kubonakele ukuba ezi zinto zibeka emngciphekweni ikakhulu zinika ithuba eliphezulu le-osteoarthritis:
Umsebenzi obandakanya ukuphindaphinda okuninzi
Imbali yosapho yesifo samathambo
Umothuko okanye iqhuma
Ke, ezinye zezona zinto ziqhelekileyo zomngcipheko wokuphuhlisa isifo samathambo ezandleni zibandakanya ukulayisha ngaphezulu ngaphandle kwembuyiselo eyaneleyo, imbali yosapho kwiingxaki ezidibeneyo kunye nokulimala kwangaphambili kwezandla. Kubhalwe ngokucacileyo ukuba i-fractures kunye nokulimala kwamalungu kuya kukhokelela kwi-osteoarthritis yangaphambili kunye nenkqubo yokuguga ngokukhawuleza.
Unyango lwe-Osteoarthritis kwiZandla
Kukho iindlela ezininzi zonyango ezinokukunika isiqabu kunye nokuphuculwa kokusebenza. Into ekufuneka uqale ngayo namhlanje kukomelela kwemihla ngemihla kunye nokuzilolonga ukugcina ukusebenza kunye nokomeleza ukujikeleza kwegazi.
Unyango olwenziwe ngezandla, kubandakanya ukudibanisa kunye nokusebenza kwemisipha, okunokubhalwe kakuhle kwi-osteoarthritis kunye neempawu zayo. Unyango lomzimba kufuneka lwenziwe yingcali yezempilo yoluntu. ENorway, oku kuthetha ukuba uphysotherapist, chiropractor wale mihla okanye ugqirha wezonyango.
Uninzi lwabantu luyamangaliswa kukuba uphando lubonisa ukuba unyango olunje ngezihlunu kunye nokudibana luyasebenza ngakumbi kunokuzilolonga.1) xa kufikwa ekunciphiseni iintlungu kunye nokubonelela ngomsebenzi ophuculweyo. Emva koko cinga ukuba lusebenza njani unyango olunje ngokudibanisa nokuzivocavoca kwasekhaya? Ii-chiropractors zanamhlanje ziphatha zombini izihlunu kunye nokudibana, kunye nokuyalela kwimithambo yekhaya kukunika ukubuyela ixesha elide. Ukuba une-osteoarthritis ebanzi kwaye ulwa nokuzilolonga ngokwendabuko, sinokucebisa kakhulu uqeqesho kwichibi lamanzi ashushu.
Unyango lomzimba lusenokubandakanya unyango lwe-laser kunye nonyango ngenaliti.
Ukutya okunomxholo ophezulu we-antioxidant
Kubonakele ukuba ukutya okunomxholo ophakamileyo we-anti-immune (anti-immune) amaxabiso esondlo anokukunceda ukunciphisa ukuvuvukala kwamalungu kunye nokukhusela ukutshatyalaliswa ngokudibeneyo okungafunekiyo. «udinwe ukudla»Sisiqalo esihle kakhulu kuwe ofuna ukufunda ngakumbi malunga noku.
Funda: Yonke into ekufuneka uyazi malunga nokutya kweFibromyalgia
Ukuhamba ngakumbi kubomi bemihla ngemihla
Ngaba unomsebenzi okunika ukuphindaphinda okuninzi kunye nomthwalo we-tuli? Emva koko sicebisa ukuba uqaphele ukuba ufumane ukuhamba okwaneleyo kunye nokuhamba kwegazi. Joyina iqela loqeqesho, hamba uhambo nomhlobo okanye wenze imithambo yasekhaya-eyona nto ibalulekileyo kukuba wenze into oyithandayo kwaye ke ukwazi ukuzikhuthaza ekuhambeni okungakumbi kubomi bemihla ngemihla.
Funda: - 6 Iimpawu zokuqala zeOsteoarthritis
Uxilongo lwe-Osteoarthritis kwiZandla
I-Osteoarthritis ihlala ichongwa ngokudibana kokuthatha-imbali, uvavanyo lweklinikhi kunye nokuqikelela (ngokufuthi i-X-ray). Ukubona ubungakanani bokunxiba ngokudibeneyo, kuya kufuneka uthathe i-X-reyi- njengoko oku kubonisa ithambo ngeyona ndlela ibalaseleyo. Olu phononongo lokucinga luya kuba nakho ukubala ukubala kunye nomonakalo we-cartilage.
Unokuthunyelwa kuviwo lwe-X-ray ngugqirha wanamhlanje ogqirha okanye ugqirha. Olu vavanyo lokucinga kufuneka lwenziwe ngoochwephesha be-radiografi kunye nee-radiologists- hayi loo mntu ukhe wadibana naye ukuba akuncede. Ukuba ukhe wabona ugqirha onomatshini wakhe we-X-ray kwigumbi elingasemva, kungcono ukuya kwenye indawo.
Ukuba ukhathazwa ziimpawu ezinokuba kukukhumbula i-osteoarthritis ke sicebisa ukuba uyise kwi-GP yakho ukuze iphononongwe. Ukufumanisa ubungakanani besifo samathambo ngokwaso kunokunika isikhombisi esicacileyo malunga nento ekufuneka uyenzile malunga nokuthatha amanyathelo kunye nokuthintela, kunye nonyango kwikliniki egunyazisiweyo. Siyakukhumbuza ukuba unyango lomzimba ngokudibana nokuzivocavoca lunefuthe elihle kakhulu ekunciphiseni iimpawu nasekuboneleleni ngokuphuculwa kokusebenza.
Funda: Iimpawu ezi-7 zeFibromyalgia kwabasetyhini
Unokucothisa ukukhula kwe-osteoarthritis ngamanyathelo afanelekileyo, umthambo kunye naluphi na unyango. Sincoma ngokukhethekileyo ukuqala ngoqeqesho lwamandla emahlombe nasezingalweni ukuba negalelo kumadlala asempilweni, ukuphuculwa kwegazi nokujikeleza komzimba.
Ngaba unemibuzo malunga nenqaku okanye ufuna ezinye iingcebiso? Sibuze ngqo nge facebook page okanye ngebhokisi yezimvo engezantsi.
Zive ukhululekile ukuba wabelane ngolwazi malunga nesifo samathambo
Ulwazi phakathi koluntu ngokubanzi kunye neengcali zempilo kuphela kwendlela yokwandisa ukugxila ekuphuhlisweni kovavanyo olutsha kunye neendlela zonyango zokufumana isifo esinganyangekiyo. Sinethemba lokuba uza kuthatha ixesha lokwabelana ngale nto ngakumbi kwimidiya yoluntu kwaye uthi enkosi ngoncedo lwakho. Ukwabelana kwakho kuthetha lukhulu kakhulu kwabo bachaphazelekayo.
Zive ukhululekile ukuba ucinezele iqhosha elingezantsi ukuze wabelane ngesithuba ngakumbi.
IziXhobo zeGloves yesiqhelo (Ikhonkco liyavula kwiwindows entsha)
Ukusetyenziswa kwemihla ngemihla kweigloves zokucinezela kunokuba yinto efanelekileyo kakhulu kwabo banesifo samathambo kunye nesifo samathambo eminweni nasezandleni. Abaninzi banoluvo lokuba imisebenzi ethile yemihla ngemihla iba lula ngegloves yoxinzelelo.
Cofa umfanekiso okanye ikhonkco apha ngasentla ukuvula iVenkile yeMpilo yakho kwiwindows entsha.
IPHEPHA ELANDELAYO: Amanqanaba ama-5 eKneartrose
Cofa kumfanekiso apha ngasentla ukuze uqhubeke kwiphepha elilandelayo. Ngaphandle koko, silandele kwimidiya yoluntu ukuhlaziya imihla ngemihla ngolwazi lwezempilo lwasimahla.
Imibuzo ebuzwa rhoqo malunga ne-Osteoarthritis kwiZandla
Zive ukhululekile ukusibuza umbuzo kwicandelo lamagqabantshintshi apha ngezantsi okanye kwiidiya yethu yentlalo.